Kedu ihe bụ Management Management Quality?
Njikwa Nlekọta Ụlọ Ọrụ:Ogologo ochichi nke ubochi a na nlekota oru bu otu. Ha abụọ na-emesi ike iguzosi ike n'ihe na nkwenkwe siri ike na njirimara na àgwà na-eme ka ndị mmadụ na-eguzosi ike n'ihe. Ihe mgbaru ọsọ dị mkpa maka nchịkwa nke ọma bụ ịhụ na atụmatụ ahụ na-ekwu banyere nsogbu ndị e mere na mbido-ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dịghị ihe ọ bụla. Na njedebe nke ụbọchị, iji kwenye na ọ dị mma, ị kwesịrị ịkwado nsogbu nke onye ahụ.
Nzukọ ma ọ bụ ihe ndị dị mkpa, ọ bụla, ọ bụghị akụkụ nke njikwa nlekọta nchịkwa. Dị ka a na-egosi site na A Guide to Njikwa Ihe Omume nke Ụlọ Ọrụ (Guide PMBOK®), ogo bụ "ogo nke nhazi nke njirimara ebumpụta ụwa na-eju afọ ndị dị mkpa."
Onye nchịkwa na onye ọrụ nchịkwa nwere ọrụ dị iche iche iji dozie àgwà na ọkwa (otu klas ma ọ bụ ọkwa a họpụtara na ihe ma ọ bụ nchịkwa nwere otu ihe bara uru na-eji ma ọ bụ pụrụ iche iche iche àgwà). Ọrụ a na-eme ka ọchịchọ dị mma dị.
Nke a na-egosi na ọ nwere ike ichepụta ma nwee ezi uche inwe àgwà, ọnụọgụ nke abụọ, ma ọ dịghị mgbe ọ ruru eru inwe ihe dị ala.
Njikwa Nlekọta Ụlọ Ọrụ
Na mmalite nke azụmahịa ahụ, a ga-edozi mkpa dị na ndị mmekọ. Ihe ndị a dị mkpa ga-abanye na nhazi maka ọrụ nke ịzụ ahịa ahụ. Site na mgbe ahụ gaa n'ihu, ọrụ nlekọta onye ọrụ ahụ bụ iji jide n'aka na ọrụ ahụ agwụla n'enweghị ihe ndị ọzọ gụnyere. Ogoghi abughi inye onye ahia ihe ndi ozo ma obu kpochapu oru ozo. Echiche nke ihe ndị ọzọ na-abụkarị na ìhè nke echiche na-ezighị ezi nke ihe ị tụkwasịrị obi na onye ahịa chọrọ. Ihe ndị ọzọ a gụnyere oge, ego a na-atụghị anya ya na mmetụta dị iche iche na-emepụta ma ọ bụghị n'ozuzu ha na-eme ka ndị mmadụ na-eguzosi ike n'ihe.
Inye usoro nlekọta isi gụnyere usoro atọ dị ịrịba ama:
Dezie nlekọta nchịkwa: ịmata ihe ndị dị mkpa na ihe ndị dị mkpa maka ahịa na ihe.
Mee mma nkwenye: nyochaa njirimara dị mkpa na nchịkwa njikwa akara iji hụ na ụdị ejiji dị mma.
Njikwa mma: nyocha na idekọ ihe na-emetụta àgwà dị mma iji tụlee mmegbu na-atụ aro mgbanwe dị mkpa.
Ihe àgwà dị mkpa bụ ịghọta usoro atọ a. Iji nwee ikike ịkọwa àgwà, ị kwesịrị ịkọwapụta ihe dị mkpa maka usoro ndị a:
Ndebanye aha: na-ekwu na ihe ahụ na-emezigharị na ihe ndị dị mkpa
Nkwenye: enweghi ihe di mkpa
nkenke: ihe a na-eme na nnọkọ siri ike
nkenke: ịbịaru nso nke ihe ụfọdụ iji gosipụta ezigbo ùgwù
Mmetụta: ihe kacha mma
Usoro nhazi nke Ụlọ ọrụ Management nhazi usoro na-ekpebi ọkwa dị mma nke bụ ihe onwunwe maka ịzụ ahịa na imepụta ụzọ iji mezuo ha. Ebumnuche bụ ime ka nlekọta nchịkwa mee ndokwa maka akụkọ ndị na-eso:
Ụzọ otu a ga-esi arụ ọrụ atụmatụ
Ụzọ a ga - esi mezuo njirimara nke abụọ ma ọ bụ ihe ahụ n'etiti ụlọ ọrụ
Ihe onwunwe achọrọ iji kwenye na mma
Mmezi mmezi dị mkpa iji mee ndokwa edozi
Ịmata ọdịiche dị na ihe ndị a nwere ike imelite mmelite na atụmatụ nlekọta atụmatụ ma ọ bụ kalenda, nke na-emesi ọganihu nke ndokwa na nyocha ndekọ.
Nhazi ahụ, dịka akụkụ dị iche iche mere n'etiti usoro nhazi ahụ, onye na-ahụ maka ọrụ na-agụnye onyinye site na ndị mmekọ. Mgbe ị na-adị njikere maka mma n'achụmnta ego na-eme mgbe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-edozi. Na ohere na enweghi nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ahụ kwesịrị ime otu maka ịzụ ahịa ahụ. Ogbesiri ndi mmadu nwere ike igbanwe uzo ozo nke oma.
Azịza Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ
Business Analysts Asambodo maka Beginners & Ọkachamara